Church Music | MPS Institute of Music
The Bachelor of Arts in Church Music prepares you to becomeaprofessional church music ministry. MPS' Bachelor of Church Music will help you becomeamusician with the knowledge and skills to conduct choirs, accompaniment teams, and orchestras belonging to various Christian denominations in Myanmar.
This course providesabackground in performing and conducting, along with an understanding of the historical and contemporary flow of church music. The curriculum includes biblical courses and personal study and instruction on piano and musical theories. The final year is completed through an internship atalocal church in Yangon.
Recital Performance (5 semesters) -5credits
Instrument Major (7 semesters) - 21 credits
Instrument Minor (4 semesters) -4credits
Ensemble (4 semesters) - 8 credits
Orchestra Practice (7 semesters) - 14 credits
Introduction to Church Music -3credits
Sight-Singing (3 Levels) -6credits
Ear Training (3 Levels) -6credits
Keyboard Harmonics - 1 credit
Arrange & Composing -2credits
Introduction to Brass Instrument -3credits
Cunducting (2 courses) -4credits
Choir (8 semesters) - 16 credits
Advanced Choir (2 courses) -4credits
Bible (8 courses) - 16 credits
Self Management (8 courses) - 16 credits
Language (2 semesters) -4credits
Other Electives -5credits
교회음악 학사과정은 여러분이 교회음악 전문 사역자가 되도록 준비시킵니다. MPS의 교회음악학사는 미얀마의 다양한 기독교 교단에 속해있는 성가대, 반주팀, 오케스트라를 지휘할 수 있는 지식과 기술을 갖춘 음악가가 될 수 있도록 도와드리겠습니다.
본 과정은 교회 음악의 역사적 및 현대적 흐름에 대한 이해와 함께 연주 및 지휘에 대한 배경 지식을 제공합니다. 커리큘럼에는 성경 과정과 피아노 및 기타 음악이론에 관한 개인 학습과 수업이 포함되어 있으며, 마지막 학년에는 양곤의 지역 교회에서 인턴 사역을 통해 마무리됩니다.
ရားကျောင်းဂီတမှဝိဇ္ဇာဘွဲ့သည်သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချာ့ချ်ဂီတဓမ္မအမှုတစ်ခုဖြစ်လာရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ MPS ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတေးဂီတဘွဲ့သည်သင်၏ခရစ်ယာန်ဓမ္မဂိုဏ်းဂဏအမျိုးမျိုးမှသက်ဆိုင်သည့်သံစုံတီးဝိုင်းများ၊ တွဲဖက်အဖွဲ့များနှင့်သံစုံတီးဝိုင်းများကိုပြုလုပ်ရန်ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဤသင်တန်းသည်သမိုင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဘုရားကျောင်းဂီတစီးဆင်းမှုကိုနားလည်ခြင်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်နောက်ခံဖြစ်သည်။ သင်ရိုးတွင်ကျမ်းစာသင်ခန်းစာများ၊ စန္ဒရားနှင့်ဂီတသီအိုရီများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုနှင့်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးနှစ်သည်ရန်ကုန်ရှိဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတွင်အလုပ်သင်မှပြီးဆုံးသည်။